Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
UE mankany amin'ny fitaterana an'habakabaka italianina: avelao ny alitalia!
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » UE mankany amin'ny fitaterana an'habakabaka italianina: avelao ny alitalia!
Na dia tian'ny Italia Air Transport aza ny mitazona ny marika Alitalia fanta-daza, dia mety tsy maintsy mandà ny fahazoana azy izy mba hahafahany miditra amin'ny fanampiana mitentina 3 miliara euro amin'ny fanampiana ara-panjakana.
Ireo mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Alitalia, izay nantsoina hoe ITA (Italiana Air Transport) ankehitriny, dia mikasa ny hitazona ny marika taloha noho ny antony sary sy ny fitohizan'ny marketing eto amin'izao tontolo izao.
Anisan'ireo fanontaniana sy fanazavana izay nangatahan'ny Vaomiera UE tamin'ny governemanta Conte tamin'ny alàlan'ny taratasy iray manadihady ny tetezamita ny ITA vaovao ary ny Alitalia taloha, misy teboka manokana momba ny anjaran'ny marika amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manan-tantara.
Italia Air Transport, raha ny marina, dia mety tsy maintsy mandà ny fahazoana ny marika Alitalia hahazoana fidirana amin'ny fanampiana mitentina 3 miliara euro izay hampiala ny newco tarihin'i Francesco Caio sy Fabio Lazzerini.
Araka ny L'Espresso ara-potoana, ao amin'ny ny EU taratasy dia manondro ny maha-zava-dehibe ny lohahevitry ny tsy fitohizan'ny fitantanana taloha sy vaovao: lohahevitra iray misy ny fananana rehetra, saingy mety hametra-panontaniana manokana ny fizotran'ilay marika manan-tantara - miaraka amin'ny tantara 75 taona - avy amin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa.
Ny fanombohana asa miaraka amin'ny marika manan-tantara dia famantarana fa tsy manamarika elanelam-potoana mazava ny tantaran'ny kaompaniam-pirenena ny EU.
Ankoatr'izay, ireo pejy sivy ao amin'ilay taratasy dia misy fangatahana roa ihany koa amin'ny fomba famaritana ny làlan-kaleha mahomby amin'ny fitantanana IT - indrindra ho an'ireo any an-toerana izay misy ny fisian'ireo mpitatitra mifaninana - ary ny filàna hiantehitra amin'ny tolotra eropeana mangarahara sy tsy -Manavakavaka amin'ny fivarotana serivisy an-tanety sy amin'ny fikojakojana, ao anatin'izany ny famoahana ny slot misy ao amin'ny seranam-piaramanidina be olona indrindra.